Kuratidza zvinyorwa neelebheri Photography
Lysa hora Rokytnice nad Jizerou 08.04.2020. Lysa hora (Kahleberg muchiGerman) ipamusoro inowanikwa muCzech Ridge, mumakomo eGiant. Iyo yakakwira gomo iri 1344 m .. Kubva kuRokytnice nad Jizerou pane chairlift inosvika pakukwirira kwe1310 m, ipo pane chiteshi chepamusoro. Iyo cableway inovhurwa chete munguva yechando. Nekuonekwa kwakanaka kwazvo Lysá Hora pamwe negomo reMakomo eGiant anogona kuoneka kubva kuPrague kubva kure nemakiromita zana nemakumi mairi.
Labský důl Giant Makomo
Iyo Elbe mine (Elbgrund muchiGerman) igwa rakasvibira riri kumusoro rinosvikira kune Rwizi rweElbe kwaro kwaro kunowanikwa mumakomo eKrkonoše. Nzvimbo yeElbe mine iri muKrkonoše National Park uye inomhanya kubva kuLabská bouda kuenda Špindlerův Mlýn. Count Harrach akavaka mugwagwa wekutanga kuburikidza neElbe mine pakupera kwezana remakore rechi19. Kureba kwemugodhi kune anenge masere makiromita uye kunotungamirwa neiyo yebhuruu mucherechedzo chiratidzo. Yakapukunyuka Pančavský neLabský waterfall, iri padyo neLabská bouda, inowira muElbe mine. Pedyo nemugodhi pane scree bako Krakonošova Treasurement.
Nhoroondo dzeMakomo eGiant
Makomo eGiant Mountain (Riesengebirge muchiGerman, Karkonosze muPolish) ndeye geomorphological yakaoma uye yakakwirira nzvimbo yemakomo muCzech Republic neCzech Highlands. Inowanikwa kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva Bohemia (chikamu chekumadokero chiri muRiberec Region, chikamu chekumabvazuva muHradec Králové Region) uye kumaodzanyemba kwePoland chikamu cheSilesia (Lower Silesian Voivodehip). Iro gomo refu kupfuura yose mumakomo eKrkonoše uye muCzech Republic yose Sněžka (1603 m). Zvinoenderana nengano, iyo ingano mweya weKrakonoš unochengetedza makomo. Makomo eGiant ari pakati penzvimbo dzinozivikanwa pamakomo muCzech Republic.
Prachovské skály inzvimbo yedombo rejecha, nzvimbo yekuchengetedza uye chikamu cheBohemian Paradise Yakachengetedzwa Landscape Area, iri pamakiromita mashanu kusvika kuchamhembe kwakadziva kumadokero kweJičín pakati pePerachov, Pařezská Lhota, Dolní Lochov naBlaty muHradec Králové Region. Iro dombo massif rakatanga munguva yeMesozoic senge yakadzika Cretaceous sediment. Iyo nzvimbo yakachengetedzwa iri mukutarisira kweAOPK ČR - hofisi yedunhu muLiberec. Geomorphologically, iyo Prachov Rocks iri chikamu cheJičínská Hilly Hills, iyo Turnovská Hilly Hills, Vyskeřská Highlands District uye Prachovská Hilly Hills, iyo inoparadzaniswa geomorphological chikamu.
Pane zvakawanikwa zvekuchera matongo zvinoratidza kuti vanhu vagara pano mune prehistoric nguva kubva paMabwe Age. Iyo nzvimbo yose yematombo yaive nhare yakasikwa yemadzinza echiSlavic, yakawedzerwa nemameter munzvimbo shoma. Mukati, imba yekutanga imba yakavakwa. Pamwe pakupera kwezana ramakore rechigumi nematatu Veliš castle yakavakwa pane imwe yemakomo ari pasi peasalt nenzvimbo yepedyo yeVeliš. Makumi emakore gare gare ...
Itaundi riri mumupata weiyo Huťský nzizi ungangodaro rakavambwa kutenderera 1574 kunge girazi rekugadzirisa. Vokutanga vagari vemo vaigarapo pano nematanda ekuchera, ndarira, sirivheri uye mutobvu. Muna 1625, mari yemuno yakaongororwa naAlfrecht veWallenstein, avo zvakare vakavandudza mararamiro evashandi vepo. Mushure mekufa kwaValdštejn, zvinoreva izvo zvimbambaira zvinodzikira zvakare. Kubva ipapo kusvika kuzana ramakore rechi20, vagari veko vakaedza kutangazve mabasa emigodhi, asi havana kubudirira.
Kubva pakagadzwa guta rave zvakare rakagadzirwa mune yetsika girazi indasitiri. Kunyangwe mushure meHondo Yemakore Makumi Matatu, vagari veRokytnice vaive vachiri vazhinji vePurotesitendi, izvo zvakakonzera mukusabudirira kuyedza kutangwazve. Muzana ramakore rechi 18…